ISBEDDELKA SIYAASADDA DUKAANKA MIDNIMADA
Laga bilaabo xilligan laga bilaabo, Website-ka rasmiga ah ee 'berekekeartist' MA AQBALI KARO nooc kasta oo tabarucaad toos ah.
Waxaan abuurnay qorshe deeq ah oo ku saleysan dakhliga tooska ah ee Ururada aan Dowliga ahayn ama kuwa aan macaash doonka ahayn.
Ku darsiga aad ku sameyso mid ka mid ah Ururada Aan Dowliga aheyn (tan hada NGO-yada) ama kuwa aan macaash doonka aheyn waxay ku siinayaan nooc badeecad gaar ah dukaanka midnimada. (Eeg buugga)
Ku darsigaaga waa in la xaqiijiyaa adigoo noo soo diraya dukumeenti muujinaya soo gelitaanka iyo nuqul ka mid ah baasaboorkaaga ama kaarkaaga aqoonsiga (macluumaadkaan si otomaatig ah ayaa loo tirtirayaa markii la xaqiijiyo). Wax ku darsiga la sheegay waa in la sameeyay laga bilaabo taariikhda daabacaadda siyaasaddan dukaan wadajirka ah.
Marka la hubiyo saxnimadeeda, waxaad heli doontaa lambarka furaha ee "aagga gaarka loo leeyahay" halkaas oo aad kala soo bixi karto alaabta aad rabto sida ku xusan qorshaha kor ku xusan.
Haddii aad ugu deeqday 3 ilaa 5 euro NGO-ga X illaa Abriil ee sannadkan, waa inaad noo soo dirtaa caddeynta dakhliga la sheegay iyo nuqul aqoonsigaaga ah. Waan xaqiijin doonnaa oo waxaan ku siin doonnaa lambarka marin u helka alaabada buugaagta ee ku jira qiimahaas. Gali "aag gaar loo leeyahay" ka dooro badeecada qashinka oo soo dejiso. Kombaresarada ayaa ku weydiin doonta lambarkan.
WinRAR ama Dropbox
Ciyaaryahan leh qaabab .wav, .mpe ama .aac
· Adobe Reader oo loogu talagalay akhriska qoraalada .pdf
Farshaxanka berekekê ama, degelkan halka ay ku habboon tahay, LAGAMA LAHAYN mas'uuliyadda NGO ama khiyaano aan faa'iido doon ahayn, mana laha xiriir toos ah ama manfac iyaga ka yimaada. Waa shaqo iskaa wax u qabso iyo mid adag.
Alaabada VIEWPOINTS 2.003
MUHIIM AH. In badan oo sawirka ka mid ah ayaa durbaba la heli karaa. Xusuusnow in ay lagama maarmaan tahay in lagu deeqo oo, iyadoo kuxiran xaddiga, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah alaabtayada. Albamyada dambe, fadlan nala soo xiriir. Helitaanka aaggan wuxuu ansax noqonayaa xitaa haddii tabarucaada la bixiyay goor dambe (kahor Abriil 15, ansax ma aha).